Cabdillahi Jawaan oo wassir nimo u waashay iyo Osman Hindi oo diidaaya iyo danaani-gooda by Abdi Mustafe‏
Cabdillahi Jawaan oo wassir nimo u waashay iyo Osman Hindi oo diidaaya iyo danaani-gooda by Abdi Mustafe‏ 0 July 08, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 606
Cabdillahi Jawaan oo wassir nimo u waashay iyo Osman Hindi oo diidaaya iyo danaani-gooda by Abdi Mustafe‏ Cabdillahi Jawaan oo wassir nimo u waashay ayaa wuxuu caadaystay in uu warbaahinta ka guulwadeeyo oo uu xukuumada ka difaaco denbiga qaran dumiska ah ee Wiikileaks ku cadaysay. Cabdilahi guulwada nimadi waxay uula gashay in uu Wikkileaks ku sheego website aan macno badan lahayn ninkii lahaana safaarad ku hoos xidhan yay. Waa runtaa oo waxa safaaradu magan gelyada u siisay waa si aan ingiriiska iyo maraykan ku u xidhan ileyn siro badan ayu Europe iyo America ba ka fashiliyey e. Cabdillahi jawaan waxaan odhan lahaa Hassan Isse Jamac baa qawaaniinta aad u yaqaan ee intaad Osman Hindi hoos fadhidoorodWeydii Hassan sidii loo geli lahaa xukuumadan dalka iibisay. Cabdilaahi sifaha uu wasiir nimada ku doonayaa waa ta uugu liidata een dawarsi waxba ka dhicin. Adiga iyo Osman laba dhidar oo onkod kiciyey baa la idiin arkaa. Waxa kale oo la idiin arkaa laba nin oon doonahayn in Somaliland gooni isu taagto oo ku taageersan Silaanyo iyo Mohamed Cabdillahi heshiiska ay Xamar iyo Puntland la galeen. Osman Hindi horta si uu ahaaba wuxuu odhan kari waayayWiikkileaks oo wuxuu odhanayaa Weekends.
Waxaka horeysay oo uu odhanayaa Ramadaan Kareem Raxiim. Indhana Osman muraaydii fardaha oo kale ayuu ku qarinayaa. Sadexdaa arin ba wax bay tilmaamyaan qofkii caqli lihi garan karo. Osman culimadu dhowr jeer bay ash-kateeyeen in laga xidho huteelkan uu dhalin yarada ku baabiiyey ee waxaan diinta islaamku raali ka ahayn habeen oo dhan lagu sameeyo hase yeeshii dowlada ayaa tidhi u daaya intay inaga dhalin yaradu inagu soo jeesan lahayd ha inagaga mash-quuliyo daroogada e.Ansha xumida uugu weyn ee uu wadanka Osman la joogo waxa ka mida in Hotel Crown oo uu isagu uuga masu'ul yahay gabadh Ingiriiska ku nooluu ku dhex iibiyo mukhaadaraadka xashiishada iyo khamrigaba oo cid waliba ogtay. Osman Hindi maaha ninkii warbaahinta ka hadli lahaa ee markuu diidaa yahay buu is keenaa. Osman waxa loo tirinayaa in uu ubadka reer Somaliland xumeeye ee sidee buu u hadli karaaba in kasta oo waxa hadlayaa yihiin waxa calooshiisa iyo dhiigiisa ku jira.
Osman Haduu si wado kibirka iyo diidaa nimada iyo qaran dumis nimada sheekadu waxay ku noqon meelo
fog-fog oo aanan donahayn in aan maanta halkan kaga hadlo hadii se laga maar mi waayo daniba way odhan.